Dhallinta Maxaa Heysta? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ilhaan Ciise Maxamed — November 28, 2019
Asc waraxmah, aqriste ku soodhawaaw maqaalkaan oo ah mid naga dhaxeeya aniga iyo adigaba, una baahan in aan kafakarno.
1921kii-Sida aan wada ognahay Soomaaliya waxaa xureeyay dhallinyaro aad u da’yaraa xilligaas aadna u dedaalay oo juhdi kubixiyay haggaajinta dalka.
Halgankii Xornimada Soomaaliya SYL ma ahayn mid ciyaar, adiguse maxaad u qorsheysan halganka dalkaaga, diintaada iyo dadkaaga.
SYL in la’aas aaso oo dhallinyaro lagagu mideeyo aqoonyahaynno iyo wadaniyiin ah waxaa kashaqeeyay 13 dhallinyaro oo kaliya??? Bal meeshaan aan dul istaagno 13qofood o dhalinyaro kaliya ah?.
Hadaba su’aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay maxaa farqi ah oo noo dhaxeeya annaga iyo dhallinyaradii xurnimo u dirirka Soomaaliyeed?
Fikrad ahaanteyda haddii aan meelo badan kafiirinno aniga waxa aan isleeyahay waxa aad kukala duwantihiin 3midba:-
Wadaniyad La’aan: qofkasta oo wadani ah waxa uu aad ujecelyahay in dalkaan hagaago, xaqiiqada marki aan kahadalno oo aan fiirinno meesha bukta, dalka wuu burburay dhalinyaradana waxaa saameyn kuyeeshay bur-burkii dhacay, sidookalena waxbarashada laguma jecleysiin dalkooda loomana sheegin in ey u dhiman karaan. Marki aad qof dhallinyaro ah aad weydiisid maxaad u dhoofeysaa?
Isla markiiba waxa uu kuugu jawaabayaa: Dalkaan bur-bursan maxaan kaqabanayaa aniga oo arkaayo wadamada saas u dhalaakaya!!! (Dhalinyaranimeyda in aan meel fiican ku qaato ayaan rabaa, Dal bur-bursan majoogi karo ee adigana waxa aan kugula talin lahaa in aad katagto!!!). Jacayl iyo wadiniyad Dalka kuceliso dhallinyarada ayaanan jirin 70% qiyaas ahaan.
2. Mabda’ la’aan: heerka dhallinyarada mabda’oodu taaganyahay waxaa tusaale noogu filan baraha bulshada, oo aan markastaa ku aragno in dhallinyartu in ey ubadantahay “Dhaan-Raac” ama meeshii qof ujeediyaaba oo waliba aanan faa’iido ugu jirin iyaga in ey u cararaan ama raacaan.
Marka haddii uu qofku mabda’ la’aan yahay waa dhibaatada ugu weyn maxaayeelay marki Todobaadkaan laqabto kulan qofku wuu qanacsanyahay, yididiilo ayaa kujirta, dhibaataduse waa marki uu qofkale uga sheekeeyo ee lagu diido asagana meeshiisa ayuu uga harayaa!!! Waa Mabda’ la’aan?
3. Kalsooni la’aan: marwaliba oo la’isku dayo in lasameeyo ururu dhallinyaradu ku mideysanyihiin waxa aad arkeysaa in qofba meel iska taagaayo arrinka, laakiin inta badan aanan loo fakirin dhinaca wanaagsan.
Qof ayaa leh barnaamijkaan in lacag lagu cuno ayaa loosameeyay annagana waan qadsannahay, marka sidee ayay wax usocanayaan haddii aan la’is aaminin oo aan la’isku kalsoonaan?!!
Waxaa hubaal ah in dalkaan uu toosayo, uuna gaari doono hormar aad uweyn laakiin su’aasha kuu taal marki Dalka uu hormar gaaro ayaa ah “Adiga hadda aqrinaaya qoraalkaan maxaad ku darsatay Dalkaaga si’uu hormar usoo gaaro?”
F.G: Mowduucaan waa baraarujin, waxa aana qirsanahay in ey jiraan dhallinyaro aad ugu dadaala sidii uu dalkaan u hormari lahaa, waxqabad fiicannna sameeya “Hormar-Wacan Dhallinyarooy”.
Tags: Dhallinta Maxaa Heysta?
Next post Aanadii Negeeye – Qeybtii 9aad
Previous post Aanadii Negeeye – Qeybtii 8aad